Etu esi eji nzuko nchọnchọ dekọọ onye ọbịa dị na Podcast na iche iche egwu | Martech Zone
Etu esi eji nzuko emee ka ịdekọ onye ọbịa dị na Podcast na iche iche egwu
Enweghị m ike ịgwa gị ngwa ọrụ niile m jiri ma ọ bụ tinye aha na oge gara aga ka ịdekọ ajụjụ ọnụ Podcast na - na enwere m nsogbu na ha niile. Ọ baghị uru etu njikọ m si dị mma ma ọ bụ ogo ngwaike ngwaike ahụ na njiri njiko na njiri mara ọdịyo oge niile mere ka m tuda pọdkastị ahụ.
Ngwaọrụ kachasị mma m jiri bụ Skype, mana nnabata nke ngwa ahụ agbasaghị nke mere ndị ọbịa m fọrọ nke nta ka ha nwee nsogbu na nbudata na ịdebanye aha maka Skype. Ọzọkwa, n'oge ahụ m ga-eji zụrụ ihe tinye-na maka Skype ka ịdekọ ma bufee egwu ọ bụla.
Mbugharị: Zuru okè Podcast Companion
Otu onye ọrụ ibe m na-ajụ m otu m si edekọ ndị ọbịa dịpụrụ adịpụ ụbọchị ọzọ ma mee ka m mara na m ji ya Mbugharị's nzukọ software. O were ya mgbe m gwara ya ihe mere… otu nhọrọ na Mbugharị-enye gị ohere mbupụ ọ bụla esenowo dị ka ha onwe ha audio track. Naanị gaa Ntọala> Recdekọ ma ị ga-ahụ nhọrọ:
Mgbe m na-edekọ mkparịta ụka, ana m echekwa ọdịyo na kọmpụta mpaghara. Ozugbo Ajụjụ ọnụ na dechara, Mbugharị na-ebupụ ọdịyo na ndekọ ndekọ mpaghara. Mgbe ị mepee folda ebe, ị ga - ahụ egwu ọ bụla dị na folda akpọrọ aha ya nke ọma yana egwu ọ bụla so na ya:
Nke a na-enyere m aka ịbubata nke ọ bụla n'ime egwu egwu na Garageband ngwa ngwa, mee ndozi dị mkpa iji wepu ụkwara ma ọ bụ mmejọ na egwu m chọrọ, tinye intros na outros, wee bupụ maka onye ọbịa m Podcast.
M ga-ekwukwa nke ọma idebe ndepụta vidiyo gị n'oge Podcast! Ka m na agwa onye obia m okwu, ekwenyere m na ihe nlere vidio anyi si na ibe anyi tinye otutu mmadu na mkparita uka a. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na m chọrọ otu ụbọchị bipụta vidiyo vidiyo nke pọdkastị m, m ga-enwe vidiyo ndị ahụ kwa!
Maka ugbu a, ịnọgide na-enwe Podcast bụ ọrụ zuru ezu, agbanyeghị!
Tags: egwu ọdịyombupụ egwu ọdịyopodcastPodcastingiche iche egwumbugharịmbugharị ndekọ